Ipeni Uhlobo Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ipeni Uhlobo Factory
Incibilikile Carbon Dioxide Meter / CO2 Tester-CO230
I-carbon dioxide encibilikisiwe (i-CO2) iyipharamitha ebucayi eyaziwayo kuma-bioprocesses ngenxa yomthelela wayo omkhulu ekuguqulweni kweseli nasemikhakheni yekhwalithi yomkhiqizo. Izinqubo eziqhutshwa ngezinga elincane zibhekene nezinselelo eziningi ngenxa yezinketho ezinqunyelwe zezinzwa ze-modular zokuqapha nokulawulwa kwe-inthanethi. Izinzwa zendabuko zinkulu, ziyabiza, futhi ziyahlasela ngokwemvelo futhi azilingani kumasistimu amancane. Kulolu cwaningo, sethula ukuqaliswa kwenoveli, inqubo esekwe kumazinga wokulinganiswa kwensimu kwe-CO2 kuma-bioprocesses. Ugesi ongaphakathi kuphenyo ube usuvunyelwa ukuphinda ujikeleze ngeshubhu elingangeneki legesi kumitha le-CO230.
ICON30 yimitha ebiza ngentengo yezomnotho, ethembekile ye-EC / TDS / Salinity elungele ukuhlolwa kwezicelo ezinjenge-hydroponics & ingadi, amachibi nama-spas, ama-aquariums namathangi emifula, ama-ionizers amanzi, amanzi okuphuza nokuningi.
Incibilikiswe Hydrogen Imitha-DH30
I-DH30 yakhelwe ngokususelwa kunqubo ye-ASTM Standard Test. Umbandela wokuqala ukukala ukuhlangana kwe-hydrogen encibilikisiwe emkhathini owodwa wamanzi ahlanzekile we-hydrogen ancibilikisiwe. Le ndlela ukuguqula ikhono libe yisixazululo se-hydrogen encibilikisiwe kuma-25 degrees Celsius. Umkhawulo ongaphezulu wokulinganisa uzungeze i-1.6 ppm. Le ndlela iyindlela elula kakhulu futhi esheshayo, kepha kulula ukuphazanyiswa ezinye izinto zokwehlisa isixazululo.
Isicelo: Isilinganiso sokuhlushwa samanzi se-hydrogen esincibilikisiwe.
I-DO30 Meter nayo ibizwa ngokuthi yi-Dissolve Oxygen Meter noma i-Dissolve Oxygen Tester, iyidivayisi ekala inani le-oxygen encibilikisiwe ku-liquid, ebisetshenziswe kakhulu ezinhlelweni zokuhlola ikhwalithi yamanzi. Imitha ephathekayo ye-DO ingahlola i-oxygen encibilikisiwe emanzini, esetshenziswa emikhakheni eminingi efana ne-aquaculture, ukwelashwa kwamanzi, ukuqapha imvelo, umthethonqubo womfula njalonjalo. Inembile futhi izinzile, iyonga futhi ilula, kulula ukuyigcina, i-DO30 i-oksijeni encibilikisiwe ikulethela lula, idale umuzwa omusha wokuncibilika komoya-mpilo.
Indlela yokuguqula ukuthola inani le-ozone elincibilikisiwe ngokushesha ngokusebenzisa indlela yesistimu enama-electrode amathathu: ishesha futhi inembile, ifanelana nemiphumela ye-DPD, ngaphandle kokudla okuvuselelayo. I-DOZ30 ephaketheni lakho umlingani ohlakaniphile ukukala i-ozone encibilikisiwe nawe.
Imitha yamahhala ye-Chlorine / Tester-FCL30
Ukusetshenziswa kwendlela yama-electrode amathathu kukuvumela ukuthi uthole imiphumela yokukala ngokushesha okukhulu nangokunembile ngaphandle kokudla noma yimaphi ama-reagents e-colorimetric. I-FCL30 ephaketheni lakho inguzakwethu okhaliphile ukukala i-ozone encibilikisiwe nawe.
I-Ammonia (NH3) Isihloli / Imitha-NH330
Imitha ye-NH330 nayo ibizwa nangokuthi yi-ammonia nitrogen meter, iyithuluzi elilinganisa inani le-ammonia kuketshezi, ebelisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokuhlola ikhwalithi yamanzi. Imitha ephathekayo ye-NH330 ingahlola i-ammonia emanzini, esetshenziswa emikhakheni eminingi efana ne-aquaculture, ukwelashwa kwamanzi, ukuqapha imvelo, ukulawulwa kwemifula njalonjalo. Inembile futhi izinzile, iyonga futhi ilula, kulula ukuyigcina, i-NH330 ikulethela lula ngokwengeziwe, idale ulwazi olusha lwe-ammonia nitrogen application.
(NO2-) Imitha Yedijithali yeNitrite-NO230
Amamitha we-NO230 nawo abizwa ngokuthi imitha ye-nitrite, kungumshini olinganisa inani le-nitrite kuketshezi, ebelisetshenziswe kakhulu ezinhlelweni zokuhlola ikhwalithi yamanzi. Imitha engu-NO230 ephathekayo ingahlola i-nitrite emanzini, esetshenziswa emikhakheni eminingi efana ne-aquaculture, ukwelashwa kwamanzi, ukuqapha imvelo, ukulawulwa kwemifula njalonjalo. Inembile futhi izinzile, iyonga futhi ilula, kulula ukuyigcina, i-NO230 ikulethela lula ngokwengeziwe, idale umuzwa omusha wesicelo se-nitrite.
Imitha ye-Digital ORP / Ukuncishiswa Kwe-oxidation Okungenzeka Imitha-ORP30
Umkhiqizo owenzelwe ngokukhethekile ukuhlola amandla we-redox ongawuhlola kalula futhi ulandele inani le-millivolt yento ehloliwe. Amamitha we-ORP30 abizwa nangokuthi imitha engaba yi-redox, kuyithuluzi elikala inani lamandla we-redox kuketshezi, ebelisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokuhlola ikhwalithi yamanzi. Imitha ephathekayo ye-ORP ingahlola amandla we-redox emanzini, asetshenziswa emikhakheni eminingi efana ne-aquaculture, ukwelashwa kwamanzi, ukuqapha imvelo, ukulawulwa kwemifula njalonjalo. Inembile futhi izinzile, iyonga futhi ilula, kulula ukuyigcina, amandla we-ORP30 redox akulethela okulula kakhudlwana, udale umuzwa omusha wohlelo lokusebenza olungaba khona lwe-redox.
Umkhiqizo owenzelwe ngokukhethekile ukuhlola inani le-pH ongalihlola kalula futhi ulandele inani le-asidi-base yento ehlolwe. imitha ye-pH30 ibizwa nangokuthi i-acidometer, iyidivayisi ekala inani le-pH kuketshezi, ebelisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokuhlola ikhwalithi yamanzi. Imitha ye-pH ephathekayo ingahlola i-acid-base emanzini, esetshenziswa emikhakheni eminingi efana ne-aquaculture, ukwelashwa kwamanzi, ukuqapha imvelo, ukulawulwa komfula njalonjalo. Inembile futhi izinzile, iyonga futhi ilula, kulula ukuyigcina, i-pH30 ikulethela lula ngokwengeziwe, idale umuzwa omusha wesicelo se-acid-base.
Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite, Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Ph Inzwa electrode, Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium, Inzwa yeChlorophyll, Inzwa yokuqhuba ye-TDS,